galmudugnews.com » 14 sano jir Katirsanaa Guriga Madaxweynaha Galmudug oo la gowracay Home About
Home » WARARKA » 14 sano jir Katirsanaa Guriga Madaxweynaha Galmudug oo la gowracay 14 sano jir Katirsanaa Guriga Madaxweynaha Galmudug oo la gowracay galmudug on
No Comment Views 16513Jaamac Ali Madoobe oo ahaa wiil 14 jir ah Islamarkaasina Katirsanaa Guriga Madaxweynaha Galmudug Mohamed Ahmed Caalin ayaa Maydkiisa oo 10 middi ay kutaal qoortana laga jaray Lagu Arkay Gudaha Magaalada Gaalkacyo
Ilaalada madaxweynaha ayaa u dirsaday Shaah kadibna waxaa la arkay isaga oo qoorta laga jaray waxaa sidaas yiri mid kamidah goobjoogayaasha
Lama garanayo Cida falkaan kadambaysa waana markii ugu horeysay ee fal nuucaani ah uu kadhaco Deegaanada Galmudug
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21143 hitsContact US - 19987 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 19709 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 16377 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 16190 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 14882 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 14342 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 14310 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 14006 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 13787 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 12884 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 12676 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 12650 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 12364 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 12070 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11965 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11684 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 11616 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11592 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11580 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11469 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 11338 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11256 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11248 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 11076 hits Home About